Home Wararka Dibada PUTIN oo dejiyey qorshe arxandarro ah oo uu kaga aarsanayo dalalka Yurub
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dejiyey qorshe cajiib ah oo uu kaga aarsanayo dalalka Midowga Yurub, kadib xayiraadihii ay saareen iyo hubka ay ku taageeraan Ukraine.
Waa ujeedkiisa, sida aan u maleynayo, inuu dalalkan saboolka ah ka dhigo inay gaajo u dhintaan haddii aanay helin haruurka. Marka uu xanibay dekedaha, wuxuu baqe-maalayaa dunida,” ayey u sheegtay waregyska The Telegraph.
Prod. Snyder ayaa walaac ka muujiyey gaajada qeybo ka mid ah dunida, isaga oo sheegay in Russia ay leedahay “qorshe gaajo,” kaasi oo Putin uu diyaar u yahay inuu gaajo ku dilo inta badan dalalka dunida soo koreysa, taasi oo ah qeyb ka mid ah wejigga xiga ee dagaalka Yurub
Cabsida qorshaha gaajada Putin waa mid aad u weyn oo ay adag tahay inaan fahanno. Waxaan sidoo kale hilmaamsannahay sida cuntada ay xuddun ugu tahay siyaasadda,” ayuu yiri Snyder.
Next articleMASAR oo si taxaddar leh u wajaheysa Soomaaliya kadib doorashadii Xasan Sheekh
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Arrimaha Bani-aadannimada iyo...
shil gaadhi oo sababay dhimasho iyo dhaawac.